मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको राष्ट्रिय भेलाः २२ बुँदे घोषणापत्र जारी – Makalukhabar.com
मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको राष्ट्रिय भेलाः २२ बुँदे घोषणापत्र जारी
मकालु खबर	 २०७६ भाद्र २० गते प्रकाशित 39 0
भाद्र २०, काठमाडौं । भएको राष्ट्रियस्तरको मानव बेचबिखन प्रभावितहरुको चौथो राष्ट्रिय भेला–२०७६ ले २२ बुँदे घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको छ । यही भाद्र १८ र १९ गते शक्ति समूहको आयोजना र एट्विनको सह–आयोजनामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उक्त भेलाको बारेमा जानकारी गराईएको हो ।
मानव बेचबिखन विरुद्धको तेह्राैँ राष्ट्रिय दिवस, २०७६ को अवसरमा आयोजित उक्त भेलामा ७ वटै प्रदेशहरुबाट सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । भेलामा १०३ जना बेचबिखनबाट प्रभावितहरुलगायत ३०३ जना सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
भेलामा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै तीनको अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गरिएको छ । ललितपुरको जावलाखेलमा सम्पन्न उक्त भेलामा सात वटा प्रदेशबाट सहभागी भएका सहभागीहरुबाट नै राष्ट्रियस्तरको प्रभावितहरुको सञ्जाल गठन भएको र सञ्जालको मुख्य नेतृत्व शक्ति समूहकी चरी माया तामाङ्गले गरेकी छिन् ।
भेलामा निर्माण गरिएका १७ जनाको तदर्थ समितिले प्रत्येक सात वटा प्रदेशस्तरीय संजाल गठन गर्ने कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने संयोजक तामाङ्गले जनाईन् । चौथो राष्ट्रिय भेला–२०७६ को नाममा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘नेपालभरि नै पहिलोपटक, पहिलो प्रभावितहरुको राष्ट्रियस्तरको सञ्जाल निर्माणको कार्य यस भेला मार्फत सुरुवात भएको छ । आजसम्म मानव बेचबिखन विरुद्धमा कार्य गर्ने संघ संस्थाहरुले प्रभावितहरुको लागि वकालत गर्दै आईरहेको कुरा हामीमाँझ अवगत नै छ । र, आजको दिनबाट बेचबिखनविरुद्ध यो सञ्जालले पनि हातेमालो गर्नेछ ।’
उक्त भेलाद्धारा निर्माण गरिएका सञ्जालले प्रभावितहरुलाई सुरक्षित मञ्च प्रदान गर्ने संयोजक तामाङ्गले बताईन् ।
चौथो भेलाले समानान्तर प्रकारको सञ्जाल निर्माण राष्ट्रियस्तर र प्रदेशस्तरमा मात्रै नभई जिल्लास्तरमा र स्थानीयस्तरमा पनि ईकाई समूहको रुपमा गठन गरि मानव बेचबिखन प्रभावित महिला र बालबालिकालाई प्राथमिकतामा राखि कार्यहरु अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
संयोजक तामाङ्गका अनुसार गठित संजालको मुख्य कार्य प्रभावितहरुलाई कानुनी वकालत, उद्धार, स्वदेश फिर्ती, पुर्नस्थापना र तिनै तहका सरकारसँग वकालत तथा परैवी गर्ने हो । ‘संजालले प्रभावितहरुलाई उद्धार गर्ने र उद्धार गरिएका प्रभावितहरुलाई छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फिर्तीका कार्यमा नेपाल सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने काम पनि गर्दछ ।’ उनले भनिन् । भेलाबाट निर्माण गरिएको राष्ट्रियस्तरको संजालको मुख्य सचिवालय शक्ति समूहको मुख्य कार्यालयमा रहनेछ ।
सञ्जालले मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधलाई निरुत्साहित गर्ने राष्ट्रियस्तरको अभियानलाई सफल पार्ने मुख्य उद्देश्य लिएको छ । मानव बेचविखन किन हुन्छ ? र को–को यसबाट सिकार हुन्छन् ? भन्नेबारे प्रकाश पारेकी थिईन् । उनकाअनुसार रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएकाहरु नै यसबाट बढि प्रभावित भएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला तथा बालबालिका बेचविखनविरुद्धको सहकर्मी समूह नेपालकी अध्यक्ष अञ्जना शाक्यले संस्थाले सुरुदेखिनै शक्ति समूहलाई सहयोग गर्दै आएको र अहिलेसम्म त्यो सहयोग जारी रहेको सुनाईन् ।
प्रधामन्त्रीको स्वस्थ्य सामान्य अब कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने
शिरदेवीको शिर उचो पार्ने काम, लागू औषध विरुद्ध सचेतना